Hicaz Railway Tabuk Station Station | RayHaber | raillynews
HomeDUNIDAAasiya966 Sacuudi CarabiyaHiaz Railway Tabuk Station
Hiaz Railway Tabuk Station
11 / 05 / 2020 966 Sacuudi Carabiya, Aasiya, DUNIDA, tareenka, GUUD
Xarunta tareenka ee Tabuk
Saluk station waxaa la dhisay sanadkii 1906 (Hijri 1324). 31. Xaruntan ayaa ah mid ka mid ah saldhigyada ugu muhiimsan uguna weyn ee ku taal khadka Tareenka Hicaz. Danaha saldhigan wuxuu ka yimid muhiimadda magaaladan. Saldhigga tareenka ee Tabuk ayaa ah xarunta ugu weyn kadib xadka ay la wadaagto Jordan.
Dhismooyin fara badan oo saldhiga ah ayaa muujinaya muhiimadda meeshan. Waxaa jira saddex dhismeyaal loo adeegsaday ujeedooyin kala duwan halkan. Madaxa dhismayaashan ayaa ah dhismaha weyn ee saldhiga, oo ka kooban laba dabaq, saqafkiisuna u janjeedha yahay laba jiho, oo leh haan biyo laba jibbaaran iyo dabeysha dabaysha oo biyo u dhaansata. Waxaa jira dhisme keliya oo dabaq leh oo leh afar sawir oo hool leh, horena leh naqshad lamid ah shanta saldhig ee hore iyo saqafka sare. Qeybta hoose ee saldhigga waxaa ku yaal dayactirka tareenka iyo dhismaha dayactirka, kaasoo leh laba albaab oo ballaaran oo loogu talagalay marinnada tareennada ee u baahan in la daryeelo iyo godad yar oo qiiqa ka baxa tareennada, oo leh saqaf laba-dabaq ah. Waxa ku xigta dhisme yar oo leh dabaq iyo barkad weyn oo biyo ah oo qaab wareega ah. Waxaa ku xigay dhisme kale oo yar. Qaybta dhexe, waxaa ku yaal saddex dhisme oo ka kooban laba dabaq. Dhismooyinkani waxay umuuqdaan kuwa lamid ah qaabeynta saqafkoodana waxay u jeedsanyihiin labo jiho. Waxaa sidoo kale jira dhowr bakhaarro kale.
Galitaanka xaruntaan dhowaan la dayac-tiray ayaa la mamnuucay oo ay hareereeyeen xayndaab bir ah. Dib u soo celinta xaruntan ayaa sidoo kale la tixgelinayaa, maadaama saldhigyada qaar sida Madaen Saleh iyo Madiina Al-Münevvere ay dib loo soo celiyey oo loo beddelay matxaf. Si ka duwan waxa aan ku aragnay shanta saldhig ee kale, dhismayaasha halkan ku jira ayaa xaaladdoodu wanaagsan tahay.
Hinaz Railway Medina Station Station
Xarunta tareenka ee Hicaz Railway Mashhad
Saldhigga Tareenka ee Xaafadda Hicaz
Saldhigga Tareenka ee Hicaz Viben
Hicaz Railway Zat El-Hac Tareenka Saldhigga
Hicaz Railway Zümred Station Train Station
Shaqada loo yaqaan 'Asphalt Work' wuxuu kusii socdaa Tram Passes ee Eskişehir
Maanta oo Taariikh ah: May 2, 1900 Dhisida Wadada II.Abdulhamid's Hejaz Railway…
Ogeysiiska Iibsiga: Nidaamka Tareenka ee U dhexeeya Keçiören Kuyubaşı Station - Xarunta Yaanoorta…